अमेरिकाको जस्तो अत्याधुनिक क्यान्सर उपचार सेवा प्रदान गछौं « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७१, १२ चैत्र बिहीबार ०३:१० मा प्रकाशित
डा. बिजेश राज घिमिरे मेडिकल डाइरेक्टर,मेडिकल अंकोलोजिष्ट नेपाल क्यान्सर हस्पिटल
क्यान्सर लागेका बिरामीहरुले अहिले के कस्ता दुःख झेल्न बाद्य छन् ?
छिमेकी मुलुक भारतमा निकै कठिनका साथ धेरै नेपालीहरु क्यान्सर उपचार गराउन बाद्य छन् । जस्तोः भारतको राजीब गान्धी क्यान्सर हस्पिटललगायतका धेरै क्यान्सर उपचार गर्ने अस्पताल आसपासमा भाडामा कोठा लिएर सयौं बिरामीले क्यान्सरको उपचार गराइरहेका छन् । क्यान्सर खर्चिलो उपचार हो र यसको उपचारमा लामो समय लाग्छ । आवतजावत र बसोबासमा बिरामीहरुको धेरै खर्च भइरहेको छ । हाम्रो अनुमानअनुसार नेपालबाट एक वर्षमा एक अर्ब ३० करोड भन्दा बढी रुपियाँ क्यान्सर उपचारका लागि विदेशीने गरेको छ । यसमा आउने जाने खर्च जोडिएको छैन । नेपाली जनताले पाएको यो सास्ती सानो समस्या होइन । मुलुकमा बर्षेनी २०—२५ हजार नयाँ क्यान्सर रोगी थपिने र ७० हजार भन्दा बढी व्यक्ति क्यान्सरलाई क्यान्सर भएको अनुमान छ । हाल मुलुकमा भइरहेको उपचारले यो संख्यालाई धान्न सक्ने देखिदैन । अत्यधिक जनरल अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुमा पर्याप्त क्यान्सर वार्डको व्यवस्था गरिएको पनि पाइँदैन ।
नेपाल क्यान्सर हस्पिटलले क्यान्सर उपचारमा कस्तो सुविधा प्रदान गर्दैछ ?
यस हस्पिटलबाट क्यान्सरका बिरामीहरुले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उपचार सेवा प्राप्त गर्दैछन् । विदेशतिर क्यान्सरका लागि एभिडेन्स बेश मेडिसिनको आधारमा प्राक्टिस हुने र होलिस्टिक एप्रोचको अवधारणा अपनाइएको हुन्छ । बिरामी अस्पतालमा पुगिसकेपछि प्याथोलोजिष्ट, क्लिनिकल अंकोलोजिष्ट, सर्जन सबै एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरी बिरामीको अवस्था अनुसार कुन उपाय अपनाउने भन्ने ठोस निर्णयमा पुग्छन् । हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राक्टिसलाई अंगिकार गरेका छौं । हामीले विश्वकै उत्कृष्ठ अत्याधुनिक रेडिएसन मेसिन जडान गर्दै छौं । यसरी नेपालबाट क्यान्सर उपचारका लागि विदेशीन बाद्य भएका हजारौं बिरामीलाई राहत पुग्ने छ भने क्यान्सर उपचारकै नाममा विदेशिने देशको ठूलो धनराशी जोगिने विश्वास लिएका छौं । अब अमेरिका जस्ता ठाउँहरुमा उपलब्ध क्यान्सर उपचार सेवा मुलुकभित्रै प्रदान गर्ने अभियानका साथ अघि बढेको जानकारी गराउँछु ।
सेवा सुविधा कत्तिको सर्वसाधारणको पहुँभित्र छ ?
धेरै महँगो शुल्क छैन । सामान्य अस्पतालमा लिइने शुल्क सो सरहनै उपचार सेवा दिँदैछौं । नाफा भन्दा पनि सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । हामी गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्दैनौं ।
क्यान्सर लागेपछि बिरामी पनि नबाँच्ने र धनराशी पनि सक्ने भन्ने भनाइ छ । यो कुरा कतिको साँचो हो ?
सुरुको अवस्थामा क्यान्सर डायग्नोसिस भएमा यहाँले गर्नुभएको प्रश्न साँचो हुन सक्दैन किनभने अमेरिकाले दुई वर्षदेखि क्यान्सरलाई दीर्घ रोगमा राखेको छ । ३३ प्रतिशत रोकथाम, ३३ प्रतिशत उपचार र ३३ प्रतिशत प्यालिएटिभ केयर दिनुपर्छ । नेपालमा रोकथामका अभियान सञ्चालनमा छैन । करिब ७० प्रतिशत क्यान्सर तेस्रो तहमा मात्र पहिचान हुने भएकाले क्यान्सर ज्यान लेवा भन्ने आम विश्वास छ । अमेरिकामा क्यान्सरले २५ प्रतिशतको मात्र मृत्यू हुन्छ तर ७५ प्रतिशत क्यान्सरको उपचार हुन्छ तर विडम्बना नेपालमा यस्तो अवस्था छैन किनभने क्यान्सरका बिरामीहरु डायग्नोसिसका लागि अन्तिम चरणमा मात्र आइपुग्छन् । यो जनचेतनाको अभाव हो । त्यसैले चाँडै क्यान्सर पहिचान भएमा यसलाई राम्रोसँग निको पार्न सकिन्छ ।
क्यान्सर रोकथामका अभियानहरुलाई कसरी अघि बढाउनुभएको छ ?
क्यान्सर उपचार गर्नुमात्र हाम्रो लक्ष्य होइन । हामीले रोकथाममलाई पूर्ण प्राथमिकतामा राखेका छौं । यसका लागि अस्पतालमा छुट्टै प्रिभेन्टिभ सेक्सन स्थापना गरेका छौं । ठाउँ ठाउँमा जनचेतना अभिबृद्धि विभिन्न क्याम्पहरु सञ्चालन गर्दैछौं । हरेक घर घरमा क्यान्सरबारे जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु छन् । यसका साथै रोग चाँडै पत्ता लगाउन स्क्रिनिङ प्याकेजहरु अघि बढाएका छौं । आफूलाई क्यान्सरको शंका लागेमा वा लाग्न सक्ने संभावना बोकेकाहरुले अस्पतालमा आएर डायग्नोसिस सेवा लिन सक्छन् ।